Warbixin: Muqdisho oo isku diyaarinaysa doorashooyinka - Somalia Focus
Warbixin: Muqdisho oo isku diyaarinaysa doorashooyinka
by Hassan Ali | Monday, Dec 12, 2016 | 251 views
12,December,,2016(SofoNews) Ayadoo si rasmi ah loo soo geba gebeyey doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ee deegaanad maamul goboleedyada ayaa waxaa lagu wadaa in magalad Muqdisho lagu qabto doorashooyinka madaxtinimo iyo tan baarlamanka.
Waxaa soconaya doorashooyinka xubnaha aqalka hoose u matalaya Somaliland inkastoo aqalka sare weli uu xoogaa muran uu ka taagan yahay.
Amaanka magalad Muqdisho ayaa siweyn loo adkeeyey waxaana xaafadaha iyo degmooyinka intabadan lagu arkaya ciidamo isku dhaf ah.
Isku socodka dadka iyo gaadiidka ayaa hakad kujira sababo laxiriira cabsi laga qabo in Alshabaab ay weeraro ka geystaan magalaad Muqdisho inta doorashooyinku ay socodaan.
Dadka ayaa la arkaya ayagoo cagta maalaya islamarkaana ma kuuqata murugo iyo walwal ku aadan musaafada fog oo ay dantu biday in ay ku socdaalaan ayadoo aanay jirin wax gaadiid ah oo soconaya, marka laga soot ago gaadiidka dowladda.
Doorashada sanadkan ayaa u muuqataa mid ka duwan kuwii hore ayadoo markii ugu horeysay gobolada dalka xildhibaanada laga soo doortay, waxaa jira musharixiin badan oo u hanqal taagaya n ay qabtaan xilka madaxtinimo ee Soomaaliya.
Sawirada wadooyinka ku dhagan ee musharixiinta waxaa kamid ah, madaxweyne Xasan Sheekh Max’uud oo xilkiisu dhamaaday, Sheekh Shariif, Sheekh Axmed , Raiisul wasaare Sharma’arke, iyo siyaasiin kale oo dhowr jeer isku dayay in ay u tartamaan xilkaasi balse looga itaal roonaaday iyo kuwo kale oo ku cusub siyaasadda Soomaaliya.
Hadal haynta ugu badan ayaa ah cidda ku guuleysandoonta doorashada madaxweynaha iyo kan guddoomiyaha baarlamaanka inkastoo markasto ay tahay cad iyo madow oo ciddii calaf u leh un ay ku soo bixi doonto, balse kama marna isku dayaada shaqsiyaadka uu kujiro damaca siyaasadeed.
Bayaan wada jair ah oo ay soo saareen madaxweynayaasha Puntland iyo Galmudug